တစ်ဦးကလေးအထူးကုစကားလုံးက "နို့တိုက်" မှကြားနာတိုင်းငယ်ရွယ်မိခင်, ကကဘာလဲဆိုတာမသိအခါကအမျိုးသမီးတွေအတွက်စတင်သည်။ ဤဝေါဟာရကိုထုတ်လုပ်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်မှမိခင်နို့၏ရင်ပတ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
အမျိုးသမီးတွေအတွက်နို့မှု၏ဖြစ်စဉ်ကို3အဆင့်ဆင့်ပါဝင်သည်:
ပထမအဆင့်မှာတော့ကင်ဆာတိုက်ရိုက်တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်းမရှိ။ Lactogenesis ချက်ချင်းကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းနို့ Secret ဖြစ်ပျက်စဉ်အတွင်း။
Laktopoezom ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်မိခင်နို့၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်။ နို့ - ဤသူအပေါင်းတို့သည်3အဆင့်တစ်ခုတည်းအယူအဆအောက်တွင်ပေါင်းစပ်နေကြသည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်တစ်နို့နို့အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုနားလည်သဘောပေါက်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်နို့၏ခွဲခြာမွေးပြီးနေ့က 2-3 ရက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ရှည်လျားသူတို့ရှေ့မှာ, များစွာသောမိန်းမတို့သည်နို့သီးခေါငျးကနေဆင်း၏ထံတော်မှခံရ။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သူတို့ကတခါတရံအဖြူသို့မဟုတ်အဝါရောင် Ting နှင့်အတူအရောင်ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည် colostrum, ဆိုလိုသည်မှာ ဂလင်းများကဖြန့်ချိသောပထမဦးဆုံးနို့။ ကွဲပြားအင်္ဂါရပ်ကမြင့်မားတဲ့အဆီအကြောင်းအရာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အသုံးဝင်သောတ္ထုများသိသိသာသာအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေအတွက်နို့၏ဇီဝြဖစ်စဉ်သည်၎င်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက် mammary ဂလင်း၏နို့သီးခေါင်းဆွလိုအပ်ပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာများ၏ပေါင်းစပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်သော hypothalamus အတွက်အချက်တစ်ချက်လွှတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ဤအချိန်တွင်ခဲ့ prolactin ခန္ဓာကိုယ်ကနို့ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသည်။
ဒါကဘာကြောင့်, စတင်ရန်, လူအပေါင်းတို့၏ပထမနှင့်နို့၏နောက်ထပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှရင်ပတ်မှကလေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကလေးကိုချက်ချင်းနီးပါးမွေးဖွားပြီးနောက်, ပင်ပေးပို့ခန်း၌လျှောက်ထားသည်။
ပျမ်းမျှအားတွင်, ခန္ဓာကိုယ်ကနို့ထုတ်လုပ်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. 12 လကြာပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်အများအပြားအချက်များရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်နို့တစ်စိတ်ဖိစီးမှုလှုပ်ခြင်းရောဂါပြီးနောက်ရုတ်တရက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရနိုင်ပါသည်။
မိခင်ကိုမကြာခဏပြုလုပ်သောအရာကိုနားမလည်ကြဘူး "ရင့်ကျက်နို့" ဟူသောဝေါဟာရကိုနားထောင်ကြလော့။ ဒီရေကရင်သားနို့များမရှိခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဒါကဇီဝကမ္မပြည်နယ်, ဆိုလိုသည်မှာ ကရင်သားနို့စို့ကလေး၏အချိန်မှာလာပါတယ်။ ရင့်ကျက်နို့၏ဖွဲ့စည်းခြင်း3လအထိကြာပါတယ်။
အမြိုးသားအကြီးပြင်းခဲ့ကြသည့်အခါထိုအခြိနျမှာ, ငါ့အမိ, တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးကလေးအထူးကုဝေါဟာရကို "နို့ involution" ၏စကားကိုနားထောငျ, ဒါပေမယ့်သူကဘာလဲဆိုတာသိကြပါဘူး။ ဒီရေးဆွဲရေးလက်အောက်တွင်ရင်ပတ်ထဲမှာ glandular တစ်ရှူး volume ထဲမှာတစ်ဦးကျဆင်းခြင်း, နို့၏ပြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသောနို့တိုက်ကာလ၏ပြီးစီးနားလည်သဘောပေါက်။ သူသည်ဆိတ်သငယ်၏ 3-4 နှစ်ကဘဝကိုမှလေ့လာသည်။
Mastitis နို့တိုက် - ရောဂါလက္ခဏာများ
နို့အတွက် "Milky Way"
ဆုံးရှုံးသွားသောနို့ - နို့တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို?
တဦးတည်းမိခင်ဖရဲသီးနှင့်ဖရုံ nursing နိုင်သလား?
Gwen Stefanie နှင့် Gavin Rossdale ကလေးငယ်တစ်မျှော်လင့်ဟောင်းများသူနာပြုကလေးများ
2013 ခုနှစ်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ညဉ့်ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်၏ 15 စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဓာတ်ပုံများကို
ကလေးမြားအတှကျပညာရေးဂိမ်းများကို9လ
ရောင်ရမ်း, ကိုယ်လက် - အကြောင်းရင်းများ
Herring များအတွက် Marinade
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Basil ကဘာလဲ